အခွန်ဝန် ထမ်းများတွင် မပြုပြင်ဘဲ အကျင့်ဆိုးများ ရှိနေဆဲ ဝန်ထမ်းများ ရှိနေ၊ ပြုပြင်မရက ထုတ်? - Yangon Media Group
အခွန်ဝန် ထမ်းများတွင် မပြုပြင်ဘဲ အကျင့်ဆိုးများ ရှိနေဆဲ ဝန်ထမ်းများ ရှိနေ၊ ပြုပြင်မရက ထုတ်?
ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်းက”အရေးယူတဲ့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ပြုပြင်ပြီး ကြိုးစားလျက်ရှိ သောဝန်ထမ်းများ အများအပြားရှိသလိုမပြုပြင်ဘဲ အကျင့်ဆိုးများ ရှိနေဆဲဖြစ်သော ဝန်ထမ်းများလည်းရှိနေဆဲဖြစ်တာကို ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ ကိုပြုပြင်၍မရပါက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနည်းဥပဒေနဲ့အညီ နိုင်ငံ့ဝန် ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပယ်သည့်အထိ အရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင်အရေး ယူခံရသည့် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၆ ဦး ရှိပြီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ပထမ ခြောက်လပတ်တွင် ၁၇ ဦးရှိကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီး၏ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ အခွန်ထမ်းဆောင်ရက်ပျက် ကွက်သည့်အခွန်ထမ်းများကိုလည်း ဒဏ်ရိုက်နေပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီအထိ ဒဏ်ရိုက်မှုမှ ကျပ် ၁၅ဝ ဒသမ ၅၁ သန်းရရှိကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင် မောင်ဝင်းက”လိုက်နာမှုမရှိတဲ့ အခွန်ထမ်းများအပေါ်မှာ ဒဏ်တပ်ရိုက်ခြင်း၊ သတင်းပေးတိုင်ကြားသူများကိုဆုငွေချီးမြှင့်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ပထမခြောက်လပတ်မှာ ဒဏ်တပ်ရိုက်တဲ့အမှုပေါင်း ၄ဝ၃ မှုရှိပြီးတော့ ဒဏ်တပ်ရိုက်မှုကနေရတဲ့ အခွန်အနေနဲ့ကျပ် ၉၃ ဒသမ ဝ၉ သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခု ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိဆိုရင် အမှု ၆၂ဝ မှုအပေါ်မှာ ဒဏ်တပ် ရိုက်မှုကနေ ကျပ် ၁၅ဝ ဒသမ ၅၁ ကျပ်သန်းရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သတင်း ပေးတိုင်ကြားသူများကိုလည်း ဆု ငွေချီးမြှင့်မှုအနေနဲ့ ၅ ဒသမ ဝ၅ သန်းကို ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာချီး မြှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင်အခွန် ကောက်ခံမှုအသစ်အနေဖြင့် ၁.၆.၂ဝ၁၇ မှစကာ ရွှေဆိုင်များကို ရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာရောင်းချမှုအပေါ် အခွန်ကောက်ခံခဲ့ပြီး အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်း၊ ၁.၈.၂ဝ၁၇ တွင် ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများကို အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း ခွန်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိမိ၏ အနာဂတ်ကို စဉ်းစားနေရန် မလိုကြောင်း နည်းပြအလီဂရီ အခိုင်အမာဆို
နိုင်ငံရေး မီးလျှံကြားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်